Sophora Japonica Alaab -qeybiyeyaasha, Soo -saareyaasha ka soo jeeda Bolise
Soosaarida Sophora Japonica
[Magaca Laatiinka] Sophora japonica Linn.
[Qeybta La Adeegsaday] Ubaxa
[Maaddooyinka firfircoon] Quercetin, Luteolin, Rutin
[Muuqaal] Budo huruud ah oo huruud ah
1. Waxay kordhin kartaa iska caabinta cudurrada faafa;
2. Wuxuu caawiyaa ka hortagga iyo daweynta ciridka dhiig baxa
3. Joogtee oo kor u qaad iska caabbinta kaabilista caadiga ah, iyadoo yarayneysa marinkeeda
4. Wuxuu caawiyaa yaraynta xanuunka, burooyinka iyo nabarrada, wuxuu leeyahay saameyn bakteeriyada;
Ku saabsan Soo -saarista Sophora Japonica
Sophora japonica waa ubaxa ubaxa ee Sophora japonica, oo u eg hadhuudh bariis ah markii ubaxdiisu uusan ubaxin. Biyaha jaalaha ah ee la shiilay ayaa aad u cusub. Huaimi waxay leedahay saamaynta qaboojinta dhiigga iyo joojinta dhiigbaxa, nadiifinta beerka iyo nadiifinta dabka.
Soo-saarista Sophora Japonica waxaa lagu dabaqaa beerta cuntada, badiyaa waxaa loo adeegsadaa noocyada cabbitaanka, khamriga iyo cuntooyinka si kor loogu qaado difaaca aadanaha iyo ka-hortagga gabowga.